प्रहरीमा राजीनामा दिनेकाे लहर तलब कम, चाकरी चप्लुसी बढी - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
काठमाडौं । हातमा राजीनामा बोकेर महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी पुगेका एक प्रहरी हवल्दार भन्दै थिए, ‘प्रहरीको ‘जागिर’ अब पुग्यो ।’ नेपाल प्रहरीमा करिब १९ वर्ष बिताएका ती हवल्दारले ‘पेन्सनर’ सेवा पूरा गरेकाले राजीनामा दिएको बताएका हुन् । त्यस्तै राजीनामा गर्ने तयारीमा रहेका एक अर्का प्रहरी जवानले पनि प्रहरीमा अवसरभन्दा दुख–कष्ट बढी भएकाले राजीनामा दिने निर्णयमा पुगेको बताए ।
तलव–भत्ता सुविधा बढ्दैन, ती जवानले दुखेसो पोख्दै भने,‘प्रहरीमा अवसर भन्दा दुःख बढी छ, पीडा सहेर कति जागिर खानु ।’
सुरक्षा सङ्गठनमा कार्यरत तल्लो तहका कर्मचारीहरुको तलब स्केल मासिक करिब १७ ÷ १८ हजारसम्म हुन्छ । रासन वापत न्यूनतम दैनिक एकसयदेखि दुर्गममा पाँचसयसम्म भत्ता आउँछ । यो तलवले परिवार पाल्न त परै जाओस् छाक टार्न नै समस्या परेको गुनासो उनीहरूको छ ।
पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक जयबहादुर चन्द बढ्दो महँगी र न्यून तलव सुविधाका कारण सबैभन्दा बढी प्रहरी कर्मचारीहरू मर्कामा परेको बताउँछन् । प्रहरी कर्मचारीले निजामती सेवाको पियनले पाउने जति तलव सुविधा समेत नपाउने गरेका जानकारी दिए, याे खबर अाजकाे गाेरखापत्र दैनिकमा छापिएकाे छ ।
राजीनामाबारे जोखना हेर्दै प्रधानमन्त्री ज्योतिषको शरणमा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आजै राजिनामा दिने मनशाय बनाएका भएपनि उनी निकटका नेताहरुले […]
काठमाडौं । विश्वमै लोकप्रिय बन्दै गएको व्यक्तिमार्फत सामाजिक सञ्जालमा गरिने मार्केटिङ नेपालमा पनि बढ्न […]
मुलुकलाई टाट पल्टाउने ‘कामचलाउ सरकार’को षडयन्त्र, के हुन्छ अधिकार ?
काठमाडौं । चुनावको घोषणा हुनेबित्तिकै सरकार ’काम चलाउ’ बनेको सरकारले मुलुकलाई टाट पल्टाउने षडयन्त्र गरिरहेको […]
के-के निर्णय गर्‍यो मन्त्रिपरिषद बैठकले ?
काठमाडौं । सरकारले गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक बसन्तप्रकाश उपाध्यायलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। […]